EdgeCoin စျေး - အွန်လိုင်း EDGE ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို EdgeCoin (EDGE)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ EdgeCoin (EDGE) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ EdgeCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ EdgeCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
EdgeCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
EdgeCoinEDGE သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$2.83EdgeCoinEDGE သို့ ယူရိုEUR€2.41EdgeCoinEDGE သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£2.17EdgeCoinEDGE သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.2.6EdgeCoinEDGE သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr25.51EdgeCoinEDGE သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.17.95EdgeCoinEDGE သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč63.07EdgeCoinEDGE သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł10.62EdgeCoinEDGE သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$3.77EdgeCoinEDGE သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$3.96EdgeCoinEDGE သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$63.45EdgeCoinEDGE သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$21.92EdgeCoinEDGE သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$15.22EdgeCoinEDGE သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹211.09EdgeCoinEDGE သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.476.83EdgeCoinEDGE သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$3.89EdgeCoinEDGE သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$4.31EdgeCoinEDGE သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿88.1EdgeCoinEDGE သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥19.65EdgeCoinEDGE သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥301.25EdgeCoinEDGE သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩3354.91EdgeCoinEDGE သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦1088.02EdgeCoinEDGE သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽206.79EdgeCoinEDGE သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴78.09
EdgeCoinEDGE သို့ BitcoinBTC0.000249 EdgeCoinEDGE သို့ EthereumETH0.00748 EdgeCoinEDGE သို့ LitecoinLTC0.0523 EdgeCoinEDGE သို့ DigitalCashDASH0.0323 EdgeCoinEDGE သို့ MoneroXMR0.0327 EdgeCoinEDGE သို့ NxtNXT224.02 EdgeCoinEDGE သို့ Ethereum ClassicETC0.418 EdgeCoinEDGE သို့ DogecoinDOGE853.86 EdgeCoinEDGE သို့ ZCashZEC0.0356 EdgeCoinEDGE သို့ BitsharesBTS108.12 EdgeCoinEDGE သို့ DigiByteDGB92.33 EdgeCoinEDGE သို့ RippleXRP10.03 EdgeCoinEDGE သို့ BitcoinDarkBTCD0.099 EdgeCoinEDGE သို့ PeerCoinPPC9.55 EdgeCoinEDGE သို့ CraigsCoinCRAIG1308.94 EdgeCoinEDGE သို့ BitstakeXBS122.49 EdgeCoinEDGE သို့ PayCoinXPY50.13 EdgeCoinEDGE သို့ ProsperCoinPRC360.37 EdgeCoinEDGE သို့ YbCoinYBC0.00154 EdgeCoinEDGE သို့ DarkKushDANK921.1 EdgeCoinEDGE သို့ GiveCoinGIVE6217.68 EdgeCoinEDGE သို့ KoboCoinKOBO654.46 EdgeCoinEDGE သို့ DarkTokenDT2.61 EdgeCoinEDGE သို့ CETUS CoinCETI8289.93
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 00:40:03 +0000.